बजारमा बदमासी गर्ने जो कोहीलाई छोडिन्न : महानिर्देशक पुडासैनी (भिडियो सहित )
बजारमा कैफियत देखिए खबर गर्नुस्
लोकपथ संवाददाता असार १९, २०७५ | मंगलबार
औद्योगिक उत्पादनहरूको गुणस्तरमा सुधार ल्याई परिमाणात्मक वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको स्थापना भएको हो ।
यस विभागले उद्यमी, व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूमा सेवाका साथै औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापारिक लेनदेनमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यद्यपी बजारमा वस्तुहरुको गुणस्तरमा ह्रास आएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । खास कुरा के हो ?
यसै सन्दर्भमा लोकपथकर्मी अनिता आचार्यले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु विश्वबाबु पुडासैनी सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत गरिएको छ :
आमजनता अहिले नापतौल विभागबाट भइराखेका कामबाट त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यस विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
व्यवसायीहरुले नाप्ने, तौलने यन्त्रहरु जाँच गरेर, नियमित नविकरण गरेर प्रयोग गर्नु पर्छ ।
हामीले त्यसको नियमित अनुगमन गरिराखेका हुन्छौँ। समय समयमा नाप्ने यन्त्रहरुको कैफियत त्रुटि छ कि छैन भनेर पनि हामीले नियमित अनुगमन गरिराखेका हुन्छौँ।
हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ । हाम्रोमा ठूला बजारहरुको विस्तार भइरहेको छ ।
त्यसकारण आमजनता पनि यस विषयमा उत्तिकै सचेत रहनुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपी बजारमा कमि कमजोरी देखिएको भन्ने कुरा साँचो होईन । हामी निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौँ ।
गुणस्तरिय नापतौल पाउनु त हरेक ठाउँका सर्वसाधारणको अधिकार होइन र ? राजधानीकेन्द्रित भएर काम भइरहेको हो कि ?
पहिला राजधानी बाहिर ८ वटा विभाग मात्र थिए भने अहिले हाम्रा ११ वटा कार्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन् । यसको उद्देश्य भनेकै नेपालको हरेक ठाउँमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले सहजै गुणस्तरिय वस्तु उपभोग गर्न पाउनुहोस् भन्ने हो । हामी बजारको शुद्धिकरणमा लागिपरेका छौँ । आफ्ना कार्यहरुमा सुधार ल्याउन जरुरी छ भन्ने हामीले महसुस गरिसकेका छौँ ।
पहिला राजधानी बाहिर ८ वटा विभाग मात्र थिए भने अहिले हाम्रा ११ वटा कार्यालयहरु स्थापना भइसकेका छन् ।
यसको उद्देश्य भनेकै नेपालको हरेक ठाउँमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणले सहजै गुणस्तरिय वस्तु उपभोग गर्न पाउनुहोस् भन्ने हो ।
हामी बजारको शुद्धिकरणमा लागिपरेका छौँ । आफ्ना कार्यहरुमा सुधार ल्याउन जरुरी छ भन्ने हामीले महसुस गरिसकेका छौँ ।
त्यसको लागि अनुगमनहरु अझ कडाइका साथ लागू गर्नेछौँ ।
अहिले भइराखेका शाखा कार्यलयहरु कतिको पर्याप्त छन् ?
पर्याप्त छैनन् । राज्यमा विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहको विकास भएकाले आगामी दिनहरुमा स्थानीय निकाय र प्रदेशमा संगठनको विस्तार गर्न जरुरी छ ।
स्थनीय निकायहरुमा नापतौललाई कसरी सशक्तिकरण गर्ने र उहाँहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा हामी विशेष जोड दिनेछौँ ।
पर्याप्त मात्रामा नियमकानुन बनेका छन् त ?
हाम्रोमा अझै पनि पुरानै नियमकानुनको पालना गरिन्छ । समयसापेक्ष भएर यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
संशोधनको मस्यौदा पनि तयार गरिसकेका छौँ । अब विस्तारै यसलाई लागू गर्छौं र समसामयिक रुपमा आवश्यकता अनुसार यसलाई परिमार्जन गर्नेछौँ ।
एनएस चिह्न जथाभावि ढङ्गले बाँडेको भन्ने आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?
एनएसको विषयमा विभाग यति कटिबद्ध छ कि उपभोक्ताहरुले एनएस अंकित वस्तु निर्धक्क भएर प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले कसैलाई असर पु–याएको छैन ।
यदि यस्तो शंका छ भने हामी शंकास्पद वस्तुहरुको रिप्लेस्मेन्ट गराइदिन्छौँ । यस्तो केही पाइएमा हामी क्षतिपूर्ति दिन पनि तयार छौँ ।
उजुर कहाँ गर्ने ?
उपभोक्ताले बजारको कुनै पनि वस्तुको गुणस्तरमा त्रुटि पाउनुभयो भने वा नाप तौल सम्बन्धी जस्तोसुकै समस्या देखा परेमा उजुर गर्नका लागि दुईवटा निकाय छन् ।
एउटा गुणस्तर तथा नापतौल विभाग बालाजु ।
अर्को चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने निकाय अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय ।
एनएस चिह्न के को आधारमा दिनुहुन्छ ? यसका मापदण्डहरु के के हुन् ?
कुनै सेवाग्राहीले वा कुनै उत्पादक, उद्यमीले आफ्नो वस्तुमा एनएस चिह्न राख्न चाहेमा आफ्नो स्वइच्छाले राख्न सक्छन् । केही वस्तुमा मात्र एनएस अनिवार्य हुन्छ । अहिले हामीसँग ११ वटा वस्तु छन् जसमा हामीले एनएस अनिवार्य गरेका छौँ । जस्तै एलपीजी प्लान्ट, डन्डी, सिमेन्ट आदि ।
एनएस चिह्न प्रदान गर्नु अघि हरेक वस्तुको राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण गरिएको हुन्छ जसलाई हामी नेपाल गुणस्तर भन्छौँ ।
कुनै सेवाग्राहीले वा कुनै उत्पादक, उद्यमीले आफ्नो वस्तुमा एनएस चिह्न राख्न चाहेमा आफ्नो स्वइच्छाले राख्न सक्छन् ।
केही वस्तुमा मात्र एनएस अनिवार्य हुन्छ । अहिले हामीसँग ११ वटा वस्तु छन् जसमा हामीले एनएस अनिवार्य गरेका छौँ ।
जस्तै एलपीजी प्लान्ट, डन्डी, सिमेन्ट आदि ।
एनएस दिने प्रक्रियाको विषयमा कुरा गर्दा ; सर्वप्रथम कच्चापद्धार्थको व्यवस्थापन, दोस्रो उसको उत्पादन प्रक्रिया र अर्को उत्पादित वस्तुको उद्देश्य ।
यी ३ कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी उत्पादक, उद्यमीलाई एनएस वितरण गर्छौं ।
रडमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
रडमा पनि एनएस चिह्न लागेकै हुन्छ । कुनै पनि रडको गुणस्तर थाहा पाउनका लागि त्यसमा एनएस चिह्न छ कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ ।
यदि बेन्डीङ्ग गर्दा रड चर्कियो भने त्यस्ता रडहरु गुणस्तरहीन हुन्छन् ।
तर हामी नियमित जाँच गरिराखेका हुन्छौँ । हाम्रो बजारमा त्यस्ता गुणस्तरहीन रडहरु सप्लाई भइरहेका छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन ।
त्यसैले उपभोक्ताले ढुक्क भएर प्रयोग गर्दा हुन्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ गुणस्तरको जाँच कसरी हुन्छ ?
ग्रामीण क्षेत्रमा पनि हामीले यस्ता जाँचको पहुँच बढाएका छौँ ।
जनकपुर, दोलखा, रुकुम आदि जस्ता ठाउँहरुमा केकस्तो अवस्था छ भनेर अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ ।
कति प्राविधिक क्षेत्रबाट आएका सूचनाले पनि यस्ता वस्तुहरुको व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्नको लागि के छ कमीकमजोरीहरु ?
यसमा हामीले ३ वटा मुख्य कामहरु गर्नुपर्छ ।
पहिलो भनेको नेपाल गुणस्तर तर्जुमा गर्छौं, दोस्रो गुणस्तरको प्रमाणीकरण र तेस्रोमा परिक्षण ।
मुख्य कमजोरी भन्नुपर्दा हाम्रो देश नै उत्पादनतर्फ त्यति विकास भएको देखिँदैन ।
त्यसैले हामी यसलाई विकास गर्ने र अन्तर्राष्टिय बजारतर्फ उन्मुख गराउने प्राविधिक रोकावटहरुलाई कम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
एनएस चिह्न लागेका वस्तुहरु गुणस्तरिय हुन्छन् । यसमा हाम्रो कडा निगरानी रहन्छ ।
त्यसैले उपभोक्तहरुलाई निर्धक्कका साथ प्रयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।
यस विषयमा यदि कसैलाई गुनासो छ वा कुनै त्रुटि भएको अनुभव गर्नुभयो भने हामीलाई बालाजु नेपाल नापतौल विभागमा आफै गएर वा टेलिफन, चिठी जस्ता माध्यम मार्फत पनि उजुर गर्न सक्नुहुन्छ ।
हामी आफ्नो तर्फबाट जतिसक्दो प्रयास गर्नेछौँ । प्रयोगकर्ताहरुले पनि आफूले प्रयोग गरिरहेको वस्तु र सेवाहरु कति गुणस्तर छन् भन्ने जानकरी राख्ने बानी बसाउन जरुरी छ ।
किर्ते कागजात पेश गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने धन्दाको यसरी भयो पर्दाफास
बसुन्धरामा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
'फोटो अफ दि इअर'को उपाधि जितेको त्यो हृदयविदारक तस्वीर ... ! (भिडियो सहित)
बाढीले जलमग्न थियो तराई । आँखाले भ्याउन्जेल सम्म सबैतिर पानी मात्र । कति मान्छे बगे, कति घर । ...
असार २३, २०७५ | शनिबार
लोकतन्त्र दिवसकै घाँटी निमोठ्ने ओली सत्ता, खै लोकतन्त्रको सार्थकता?
वैशाख ११ को दिनाँकमा देश लोकतन्त्र जिन्दावादको नारा घन्काएर गाउँ घरका सडक किनारा वा शहरका चोक–च...
बैशाख ११, २०७५ | मंगलबार
‘अठोट लिएपछि आँट आफै जुट्दो रहेछ’
‘भगवानले तँ आँट, म पु–याउँछु भन्छन् रे ! त्यस्तै भयो मेरो जीवनमा पनि । आँट मैले गरे...
असार १०, २०७५ | आइतबार
राष्ट्रिय खेलाडी सरस्वती चौधरी भन्छिन्ः अब म पनि विदेश भासिन्छु
काठमाडौं । नेपालको ग्रामीण भेगमा भलिबललाई लोकप्रिय खेल मानिन्छ । लोकप्रिय खेल भएपनि महिला खेलाडीको...
साउन १२, २०७५ | शनिबार
जनयुद्धको प्रतिबिम्बः जे छ, ‘नाम’मा छ
रामजीप्रसाद आचार्य काठमाडौं । त्यो एकसिङ्गे जन्तुलाई के थाहा? जसको नाम हामीले गैँडा राखिदिएका छौँ । म...
पुस २१, २०७५ | शनिबार
फागुन ११, २०७५ | शनिबार
विवेकशील साझा पार्टीको प्रदेश १ को संयोजकमा अनिल भेटवाल
बार निर्वाचन समितिले गल्ती नसच्याए कानूनी उपचारः अध्यक्षका उम्मेदवार खतिवडा
विस्फोटको भ्रत्सना गर्दै विवेकशील साझाले भन्यो,‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया माथिकै चुनौती’
भारत र पाकिस्तानबीचको ‘खतरनाक अवस्था’ले आफू भयभित भए : ट्रम्प
कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताबिच हात हालाहाल, उप सभापति र सहमहामन्त्री यसरी खनिए (भिडियोसहित)
फागुन ९, २०७५ | बिहिबार
नेपाल प्रहरीका २६ एसपीले पाए जिम्मेवारी, को कहाँ (सूचीसहित)
नेपाल प्रहरीका ४० एसपीको सरुवा, यस्तो छ पूर्णसूची
मन्त्री फेर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, को–को ‘डेन्जर जोन’मा ?
फागुन १०, २०७५ | शुक्रबार
नख्खुपछि कमलपोखरीमा पनि शंकास्पद बस्तु फेला
एनसेलमाथि श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण, पोखरामा पनि एनसेलको टावर जलाइयो